Blackout Manufacturers & Suppliers - China Blackout Factory
N'ime afọ 22
Kpụrụ Anyị Na-eduzi
Ueskpụrụ, omume, na omume
Ọrụ dịịrị anyị
Ndi mmadu bu elebara anya
Ihe Mere Họrọ Anyị
Isi ihe 6 kpatara ịhọrọ anyị
Greenguard KACHARA SGS UL
Ihe mkpuchi ọla ọcha
Faiba glaasi Sunscreen Fabric
Ala Blinds Fabric
Polyester ala Blinds Fabric
Ọkara Blackout MagicalTex
Faiba glaasi ala Blinds Fabric
Verman kpuru ìsì Fabric
Vetikal Blinds Fabric
Declọ ihe ndozi Verman Blinds Fabric Semi-blackout
New Design N'ogbe Ladder Mezie Shangri-La Blinds F ...
Home ihe ndozi kwụ Shangri-La Blind Fabric ọkara ...
Mmaji Atọ Shangri-La Roller Blinds Fabric For Res ...
Ihe ndozi ulo eji eji egwurugwu emechi emechiri ulo oru
China ndozi nzuzo Zebra Blind Fabric N'ihi Office Wi ...
Multi-acha Ugboro abụọ Layer Blinds Fabric 100% Polyester
Egwurugwu ala Blinds Day-Night-Zebra Mgbochi Shades ...
Printing Blackout Zebra Day na abalị egwurugwu Duo Bl ...
China ala Blinds Day & Night Shades Part Com ...
China Office Side Screen Omenala Sunscreen Zebra Auto ...
China Machine Mainland Faux Linen Zebra Dual Day na ...
Shutter Window Sunscreen Nlereanya Spring ala Bli ...
N'èzí Manual Window Shutter Ọkara Onyunyo Dual Layer ...
Nlụpụta Sunscreen Fabric Site China Blinds Facto ...
Ọmụmụ Sunlight nzacha Commercial Sunscreen ala ...
Ahaziri Obosara China Windows Chinachọ Mma Mgbochi Co ...
China Manufacturer Sunscreen ala Blinds Fabric Su ...
N'ogbe Anti-UV faiba glaasi sunscreen akwa N'ihi R ...
Free Sample ọkara Blackout ala Blind Fabric
Eco-Enyi na Enyi Roller Fabric Polyester Ọkara Blackout
Ahaziri Roller Blinds Zebra Fabric 100% Polyester
Ndị isi ojii Zebra, nke a makwaara dị ka ndị na-ahụ maka egwurugwu, ndị kpuru ìsì, ndị na-ekpuchi ihu abụọ, ndị isi ehihie na abalị, wdg, sitere na South Korea ma bụrụkwa ndị a ma ama na mba ụwa.
Ọ nwere mmetụta dị ike atọ ma na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Ọ bụ ụdị akwa ọ bụghị naanị na-ejikọ uru nke akwa na ntupu, mana ọ na-ejikọkwa ọrụ nke blinds blinds, roller blinds and Roman blinds.I na-ejikarị ya n'ụlọ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ nri, obodo, ụlọ ọrụ dị elu na ndị ọzọ ebe. Anyị nwere ihe karịrị afọ 16 iji rụpụta ọmarịcha zebra mara mma ma dị elu.
Ejiji New Style Zebra Window Roller Blinds Fabric 3m Obosara
Zebra Window Roller Kpuru ìsì Fabric
Ihe mkpuchi ihu igwe Zebra, nke a makwaara dị ka blinds blinds, dims blinds, double-layer roller blinds, day and night blinds, wdg, sitere na South Korea ma bụrụkwa ndị a ma ama na mba ụwa.
Obosara nke windo zebra na-ekpuchi ákwà bụ 3m, ihe a bụ 100% polyester. Nlekọta na nhicha nke Groupeve zebra blinds fabric bụ dị n'okpuru:
1. Ultrasonic ihicha na-eme ka ákwà dị ka nke ọhụrụ.
2. Agụụ agụụ na mwepụ ájá.
3. Jiri igwe uzuoku fesa n’elu ebe ihe ra ka 10 cm site n’ebe nkpuchi akwa ahu di, nke puru inwe nkpopu ahihia / igba ogwu.
4. Ihicha ihicha bụ iji nweta miri ihicha, biko jiri a agụụ Cleaner na ahịhịa isi jiri nwayọọ agụụ. I nwekwara ike iji draya ntutu (emeghị ka ọ dị ọkụ) iji kpochapụ ájá na windo windo.
Dnwekoro Layer Kpuru ìsì Fabric
Igwe nkpuchi okpukpu abụọ, nke a makwaara dị ka zebra blinds, blinds blinds ,er blinds, rainbow blinds, day and night blinds, sheer blinds, wdg, sitere na South Korea ma bụrụkwa ndị a ma ama na mba ụwa. Ngwongwo nke okpukpu abụọ kpuru ìsì na-ekpuchi ákwà bụ 100% polyester.
Uwe okpukpu abụọ nwere ike idozi ọkụ na-enweghị ebe obibi. Ọ bụghị naanị na-ejikọ uru nke akwa na ntupu, mana ọ na-ejikọkwa ọrụ nke ndị na-ekpuchi venetian, ihe mkpuchi ala na ndị ìsì ndị Rom. Ọ na ọtụtụ-eji n'ụlọ, hotels, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, Villas, elu-ọgwụgwụ ụlọ ọrụ ụlọ na ebe ndị ọzọ.
Sun Shades Kemeghi Zebra Fabric Blackout
Ndị isi ojii Zebra, nke a makwaara dị ka ndị na-ahụ maka egwurugwu, ndị kpuru ìsì, ndị na-ekpuchi ihu abụọ, ndị isi ehihie na abalị, wdg, sitere na South Korea ma bụrụkwa ndị a ma ama na mba ụwa. Ihe nke akwa zebra bu 100% polyester.
The zebra ákwà nwere ike idozi ọkụ na-enweghị ebe ọ bụla. Ọ bụghị naanị na-ejikọ uru nke akwa na ntupu, mana ọ na-ejikọkwa ọrụ nke ndị na-ekpuchi venetian, ihe mkpuchi ala na ndị ìsì ndị Rom. Ọ na ọtụtụ-eji n'ụlọ, hotels, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, Villas, elu-ọgwụgwụ ụlọ ọrụ ụlọ na ebe ndị ọzọ. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ijide nzuzo na ịchịkwa ọkụ.
Adreesị: No.1098 Middle Section nke Jiannan Avenue, High-Tech. Mpaghara, Chengdu, China